Date My Pet » 3 Secrets kuti Dating pamusoro Budget Student
sei ini kuorora zuva rangu uye tine mari kuita mbatya?
Uyu kudzvanya nyaya uye kutamburira vadzidzi zvose dzidzo nyika. svondo rapfuura ichi ini ndaisambogona kutenga vaida tishu, uye kofi yangu muropa riri kutyisidzira kuparadza chikwama changu. asi, sezvo handina kuwana kumativi kudiwa kugara zvine caffeine, vadzidzi havagoni kunzvenga chokwadi kuti vari yakatanga.
Yokurarama bhajeti mudzidzi hakusi nyore. Ungave une chikamu nguva basa kana tiri mumwe rombo vashoma vane mari dzavo vabereki ', Chichiri kwehondo kunopfuurira. Kudzivisa Chishanu manheru Pizza zvakaoma zvakakwana asi kuti zvinhu zvitoipisisa, pane chimwe chinhu chiri pachena mumakoreji zvose uye mumayunivhesiti; kufambidzana.
Pasinei norunako rwako uye incredible runako, kufadza zuva rako unenge kazhinji mari imi vamwe mukanyiwa. zvisinei, pane chiedza pakupera nomumugero zvinodhura. Ndiyo zuva rako rombo rakanaka nokuti izvi zvitatu zvakavanzika kunogona kukubatsira kuorora zuva rako apo kuva akaputsa mudzidzi.
Garai pedyo kumba ... kufanana chaizvo pedyo
College ndiwo musha wako kubva pamba. chokwadi, izvozvo zvimwe zvemafaro pane musha wako chaiye ndicho. Naizvozvo une mikana yakawanda uye zvinogona musi pfungwa nyore rworudyi.
A firimu usiku uye kuti zvokudya. Netflix akanga chaizvoizvo akaita kuti kukoreji vana.
Cook pamwe chete (microwave kubika achiri kukosha!)
Kutamba mutambo wepaBoard, makadhi kana mutambo wevhidhiyo
Vaka negumbeze nhare dzokurwa pamwe chete. Munhu wose ari mwana mwoyo, regai kuramba
Nokuti mamwe Artsy-fartsy vakaroorana, kuita basa raanoziva kana pendi pamwe chete
Just nyore kutaura uye cuddling kazhinji anoshanda zvinoshamisa
Ita bhajeti urongwa
photo by bhiri & Vicki T CC
Haufaniri kudzidza zvose mukirasi. The unyanzvi kwekuronga bhajeti inokosha uye anobatsira chaizvo mumwe. Kunyange zvazvo usingagoni akaiisa pasi tangazve mako richakubatsira kuva akangwara pamusoro mari yako. Gara pasi, budai chinyoreso nepepa (kana kazhinji dzoro pamusoro tablet yako) uye anofungidzira dzenyu yepamwedzi mari. Izvi zvingasanganisira chikafu, varaidzo, zvinodiwa, chikoro rinopiwa, uye zvikuru kukosha misi. Edza kuisa pasi chete chii haugoni kurarama pasina. Next, kuwedzera costys pamwe chete uye kuwana kunoguma dzinokwana sei zvakawanda unogona kupedza pamwedzi. Zvino anouya dambudziko; edza kuenda pamusoro mari iyi, uye kunyange vasapedza kana zvichibvira. Zvino unogona kuva mudiwa wechokwadi, vachiri kubhadhara bhiri uye kunzwa zvachose akaputsa.
Shandisa Resources Your
twa Your ndewokuti pfuma yako. Ini unorira inotonhorera muzivi nenhumbi yamatanda mudonzvo uye ndebvu asi handisi. Sezvo vadzidzi tine mikana yakawanda. Munoziva avo kopani mabhuku chaunacho pakutanga kwegore uye vasina akasvinudzwa kubva? tsime, yavari rine izere mari rokuponesa zuva pfungwa ... kuva kuzokunyeperai ari discounted nyora ndivo zvazvo. Hazvina kugumira ipapo. Hazvinei kwaunoenda kuchikoro, Ndinokuvimbisa kuti vazhinji zvitoro, Restaurants nemabhizimisi kumativi ako kembasi kupa mudzidzi discounts. Mikana iyi uye kuchengetedza mari uri kuchikoro rinopiwa, chikafu uye zvakawanda. Kune zvisingaverengeki zveefa, bargains uye giveaways nokuda zvinongobva vadzidzi. Kuva fomu mambokadzi kana mambo haasi chinhu chokunyara nacho.
With izvi zvitatu zvakavanzika, iwe uchava kusingachamisiki. Unogona kukunda kufambidzana nyika nyore zvikuru uye tine mari zvasara kuratidza kuti. Saka budai uye andobata vamwe mwoyo uye ndiponese vamwe mari.